Amrit Jaishi: हाम्रा निम्ति लड्ने डा केसी र हामीहरू
हाम्रा निम्ति लड्ने डा केसी र हामीहरू
"यदी कुनै समस्या जरा गाडेर समाजमा देखा पर्छ भने कोहि यस्ता मानिस जन्मिन्छन जसले यि समस्याको जरा नै उखेलेर फाल्न अघि बढ्छन " यो सृष्टिको नियम हो र यसै नियम भित्र बाट हो सायद हाम्रो समाजमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार र शैक्षिक माफियाको अन्त्य गर्न डा केसी सर अघाडी बढ्नुभो तर दुर्भाग्य आज १२ दिन सम्म पनि यो सरकार , सम्बन्धित निकाय अझै मौन छ र आफ्नो लाज छोप्न अख्तियार बिग्यप्ती नामको एक काजजको टुक्रामा तथानाम गाली लेखेर मिडायामा दगुर्दै अत्तालीदै आउँछ र भन्छ केसी डाक्टर पागल हुन र केसीका समर्थक पनि पागल हुन , हाम्रा प्रमुख आयुक्त भगवान हुन किनकी उनी ढुङ्गालाई दैनिक ढोग्ने गर्छन , तर डा केसी पागल हुन किनकी यिनले त कर्णालीका जनताका खुट्टा ढोग्छ्न र आफ्नो तलवले औषधि किनेर नि शुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउदै हिडछ्न साच्चिकै यी पागल नै हुन ।
अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ हामी लोकमान जस्तो लोकले धिक्कार्ने भगवान बन्ने कि डा केसी जस्तो जनताले सम्मान गर्ने पागल बन्ने त ? हाम्रो अघि यी दुई भन्दा अर्को कुनै बिकल्प नै छैन । यदी कसैले मौन बसेमा त्यो पनि भगवान् लोकमानकै भक्त हुन भन्ने बुझ्दा खासै फरक नपर्ला । किनकी भ्रष्टाचार र अनियमित सङ कुनै पनि राजनितिक सिद्धान्त हैन व्यक्तीक आचरण जोडियर आउँछ । हामी सबैले सोच्नै पर्ने कुरा त के छ भने हाम्रो मौनतालाइ स्वघोसीत भगवान लोकमान र उनका आसेपसेले कतै आफ्नो समर्थन भन्दै उर्लीरहेका त छैनन । त्यसैले अब पर्खिने कुर्ने समय हामी सङ छैन यो मौनतालाइ तोडनै पर्छ अब यो सरकार यो अख्तियार यी बानेश्वरमा बस्ने भगवानले सुन्ने गरि भनौ हामी डाक्टर केसीको साथमा छौ र हामी पनि पागल हौ ।
हाम्रो बौद्धिक बेइमानी
हामी बी पी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान बाट डा केसी को समर्थन र एकेबद्धता जनाउन धरान बजार परिक्रमा गर्दै डा केसीको समर्थनमा नारा लगाउदै गैरहेका थियौ बाटोमै हामी जस्तै पुर्वान्चल इन्जिनियर कलेजका साथिहरु र धरानका नागरिक स्तर बाट पनि मौनता तोडदै
डा केसी का माग
शैक्षिक मफिया होशियार
भन्दै नारा लगाउदै आएपछि माहोल झन तातेको थियो । अनि हामी बजार परिक्रमा पश्चात् भानुचोकमा कोण सभामा परिणत भइरहदा मेरै छेउमा आएर एक जनाले भने के कार्यक्रम भैरहेको हो कुन पर्टिको हो नि तपाइहरु ? मैले एक छिन छेउमा आएर भने हामी कुनै पार्टी हनै स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हरु नागरिक स्तरबाट डा केसी सरको अनशनमा एक्बद्धता जनाउन आएका ? उनी कुन पार्टीका सकृय कार्यकर्ता थिए मलाइ
Posted by Amrit Jaishi at 20:21